Chii chinonzi Chitendero cheGerman? Ndechitendero chipi icho maGerman anotenda mazviri? | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » Germany Portal » Chii chinonzi Chitendero cheGerman? Ndechitendero chipi icho maGerman anotenda mazviri?
1 Chii chinotenda Germany?
2 Kugoverwa kwechitendero muGermany
3 Rusununguko rwechitendero mune Germany
4 Svondo Zororo zuva reGerman
6 maviri muzana German vaMuslim dzakatangira Turkey
Chii chinotenda Germany?
Vanenge zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveGerman vanotenda muna Mwari, nepo chikamu chimwe muzvitatu chisina hukama nechitendero chero chipi zvacho. Kune rusununguko rwechitendero mune Germany; dzakasununguka kusarudza kana kusasarudzawo chitendero chavanoda.
Germany. Vanenge makumi matanhatu muzana muzana veGerman vanotenda muna Mwari. Zvakangodaro, huwandu hwevatendi kumasangano maviri makuru echiKristu hwave kuderera mumakore apfuura. Vangangoita mamirioni makumi matatu veGerman, 60 muzana yehuwandu hwese, havana kubatana nechitendero chero chipi zvacho.
Kugoverwa kwechinamato kuGermany
Mamirioni 23,76 maKatorike
Mamiriyoni 22,27 maPurotesitendi
Mamiriyoni 4,4 maMuslim
MaJuda zviuru zana
Rusununguko rwechitendero mune Germany
Rusununguko rwechitendero rwuri kudiwa nevanhu rwunovimbiswa nebumbiro reGerman. Nyika yeGerman haina nzira isina kwavakarerekera panyaya iyi, nekudaro ichiparadzanisa nyika nekereke. Nekudaro, iyo nyika yeGerman inounganidza mutero wekereke kubva kuvagari, uye kuvapo kwemirairo yechitendero muzvikoro zvepamusoro kunosimbiswazve neBumbiro reGerman.
Zororo reSvondo kuGermany
Tsika inorarama zuva nezuva: zororo rechitendero rakakosha revaKristu, vakadai seIsita, Kisimusi, kana Pentekosti, zororo revanhu muGerman. Mahoridhe paSvondo nekuda kwetsika yakadzika midzi yechiKristu. Zvitoro zvese zvakavharwa neSvondo.
Makumi gumi apfuura ndakaona kuwedzera kweavo vakasiya Chechi yeKaturike neyePurotesitendi. Muna 2005, vanopfuura makumi matanhatu neshanu muzana veGerman vakatora imwe yemasangano maviri, nepo muna 62 yaive 2016 muzana chete.
Vanotsvaga paYunivhesiti yeMünster vari kuongorora zvikonzero zvekuwedzera kwehuwandu hwekubva kuchechi. Mitero yechechi yeKaturike neyePurotesitendi inogona kunge iri chimwe chezvikonzero. Muzvinafundo Detlef Pollack naGergely Rosta vanotenda kuti izvi zvinonyanya kukonzerwa nemabatiro ehumwe hwevanhu. Kunyangwe vazhinji veGerman vasiri veboka chero ripi zvaro, ivo vanoramba vachizvizivisa sevaKristu.
KUFUNGA IZVI: Ndeapi Iwo Akanyanya Kutsvaga Maporofiti kuGermany? Chii chandingaite kuGerman?
maviri muzana German vaMuslim dzakatangira Turkey
MuGerman, chinamato chetatu chinzvimbo ndiIslam. Huwandu hwevaMuslim vanogara munyika inosvika zviuru zvina makumi mana nezvina. Turkey maviri muzana kwakabva vaMuslim German. Chetatu chakasara chinobva kuSoutheast Europe, Middle East, North Africa, Central Asia uye Southeast Asia. Dzimwe dzedzidzo dzinopa makirasi echitendero chechiIslam muzvikoro zvepamusoro. Icho chinangwa ndechekusimudzira kubatanidzwa uye kupa vadzidzi mukana wekusangana nezvitendero zvavo kunze kwemamosque uye kufunga nezve zvitendero zvavo.
TAGS: Chii chinamato chevaGerman, chii chinamato che germany, germany